Ukucaciswa kokushisela kwe-cryogenic kwamasilinda wegesi angafakwanga
Ukwakheka kweDewar flask
Ithangi langaphakathi negobolondo langaphandle leDewar zenziwe ngensimbi engagqwali, kanti nohlelo lwangaphakathi lwethangi lwenziwe ngensimbi engagqwali ukwenza ngcono amandla futhi kunciphise ukulahleka kokushisa. Kukhona ungqimba lokufaka okushisayo phakathi kwethangi langaphakathi negobolondo elingaphandle. Izinto zokwehlukanisa ezishisayo eziningi kanye ne-vacuum ephezulu kuqinisekisa isikhathi sokugcina samanzi.
I-vaporizer eyakhelwe ngaphakathi ihlelwe ngaphakathi kwegobolondo ukuze iguqule uketshezi lwe-cryogenic lube igesi, futhi i-supercharger eyakhelwe ngaphakathi ingakhuphula ingcindezi ibe ingcindezi enqunywe kusengaphambili futhi iyigcine izinzile ngesikhathi sokusetshenziswa, ifezekisa inhloso yokusebenzisa ngokushesha nangokuqinile. Isilinda segesi ngayinye efakwe ngumoya inesakhiwo sensimbi engagqwali (iringi yokuvikela) ukuvikela ipayipi. Iringi evikelayo ixhunywe kwisilinda esinabakaki abane, futhi ubakaki ngamunye uboshelwe ukwenza kube lula ukusetshenziswa kwezinqola kanye nama-cranes ukuthwala isilinda segesi.
Zonke izingxenye zokusebenza zibekwa ngaphezulu kwesilinda segesi ukuze zisebenze kalula. Endaweni ezimele yokusetshenziswa, umsebenzisi angakwazi ukulawula ngempumelelo inqubo yokusebenzisa nge-valve yokukhipha, i-booster valve, i-gauge yengcindezi, i-valve yesigaba se-liquid, njll.
Ukuze kuqinisekiswe ukuthi i-liner yangaphakathi yesilinda segesi ingaphansi kwengcindezi yezokuphepha, kufakwa i-valve yokuphepha kanye ne-disk rupture ku-cylinder yegesi.
Ukusetshenziswa nezimpawu zamabhodlela eDewar
Isetshenziselwa ukuhambisa nokugcina uketshezi lwe-cryogenic njenge-liquid oxygen, i-nitrogen ewuketshezi, i-liquid argon, i-liquid carbon dioxide, i-LNG, njll. Isilinda segesi singasetshenziswa ukuphakela igesi ewuketshezi noma enomoya.
Isilinda segesi kulula ukusisebenzisa, siphephile futhi sithembekile, siyonga futhi siqinile. Izici ezithile zimi kanje
1. Uhlelo lokusekela lwethangi langaphakathi lwenziwe ngensimbi engagqwali ukufeza inhloso yokulahlekelwa ukushisa okuphansi namandla amakhulu.
2. Kulula ukuyisebenzisa futhi ingaqhutshwa ngokuzimela ngumuntu oyedwa.
3. Gcina i-cryogenic liquid emsulwa. Umthamo omkhulu wesitoreji. Umthamo wokugcina igesi we-DP175 dewar cylinder ulingana nezikhathi ezingaphezu kwezingu-18 umthamo wokugcina igesi wesilinda esezingeni eliphakeme.
4. Ingcindezi yangaphakathi yesilinda segesi izokhuphuka phakathi nesikhathi sokucishwa ngemuva kokugcwaliswa. Isilinda segesi sinohlelo lokuvikela ukusebenza oluphezulu, futhi izinga lokunyuka kwalo kwengcindezi liphansi. Ngaphansi kwezimo ezijwayelekile, asikho isidingo sokunciphisa ingcindezi nge-valve yokuphepha.
5. I-supercharger ne-vaporizer eyakhelwe ngaphakathi ingabona ukutholakala okuqhubekayo kwegesi noma uketshezi, futhi asikho isidingo sokufaka i-vaporizer yangaphandle ngaphansi komthamo owenzelwe.
Imboni Subpackage umkhakha
Qaphela: Lapho ugcwalisa igesi yemvelo, sebenzisa ama-valve okuphepha aphindwe kabili futhi uqede i-disc yokuqhekeka ethangini elingaphakathi.
Isexwayiso: Ukulungisa ibhawodi ephezulu ye-valve ehlanganisiwe elawula i-valve ngeke kube nomthelela wokusheshisa isivinini se-Pressurization. Ukulungisa ibhawodi ephezulu ye-valve ehlanganisiwe elawula i-valve ngokuthanda kuzoholela kumthethonqubo wokucindezela ohlanganisiwe. I-valve yonakele.
Ingcindezi ehlanganisiwe elawula i-valve: Le valve inemisebenzi emibili yokulawulwa kwengcindezi nokonga umoya. Lapho ucindezela, uketshezi lwe-cryogenic ebhodleleni luguqulwa lube umusi ogcwele ngokusebenzisa ikhoyili yokucindezela, bese lubuyela esikhaleni sesigaba segesi phezulu kwesilinda ngale valve, ngaleyo ndlela sinikeze ingcindezi eqhubekayo futhi ezinzile esilinda. Uma usebenzisa igesi, igesi enomfutho ophakeme kakhulu esikhaleni sesigaba segesi phezulu kwesilinda segesi ngokukhethekile idedelwa iye ngaphandle ngale valve ukuze igweme ukulahleka kwegesi okubangelwa ukuvulwa kwe-valve yokuphepha ngenxa yengcindezi yegesi eyeqile. Igama lelanga liyazenzakalela ngaphandle kokusebenza ngesandla.
Negesi ukusetshenziswa valve: Le valve ixhumeke ku-vaporizer eyakhelwe ngaphakathi, lapho kutholakala igesi enomphunga. Idinga isixhumi se-CGA esifana negesi enikezwe yisiqukathi.
Inlet futhi esidayisa valve: Le valve isetshenziselwa ukulawula ukugcwaliswa nokukhishwa koketshezi lwe-cryogenic. Umsebenzisi angaxhuma ku-CGA pipe ngokuhlanganyela phambi kwe-valve nge-hose ekhethekile, Yenza ukugcwaliswa nokukhishwa kwamasilinda egesi.
Ukukhuthaza valve: Le valve ilawula isekhethi yesekhethi eyakhelwe ngaphakathi. Vula le valve ukucindezela ibhodlela.
Khama valve: Le valve ixhunywe esikhaleni sesigaba segesi sesilinda segesi. Ukuvula le valve kungakhipha igesi kusilinda futhi kwehlise ingcindezi.
Ingcindezi yokulinganisa: Ibonisa ingcindezi yesilinda segesi, iyunithi ingamakhilogremu nge-intshi ngayinye eyisikwele (psi) noma ngama-megapascals (MPa).
Igeji yezinga: Isilinganisi sezinga lesilinda siyinduku yensimbi entantayo yohlobo lwentwasahlobo, esebenzisa ukugcwala koketshezi lwe-cryogenic cishe ukukhombisa uketshezi lwe-cryogenic ku-cylinder Capacity. Kepha isilinganiso esinembile kumele sikalwe.
Idivayisi yokuphepha: I-cylinder liner yakhelwe nge-valve yokuphepha esezingeni lokuqala kanye ne-disc esezingeni lesibili ukuvikela isilinda uma kucindezelwa ngokweqile. (Esimweni sokucindezelwa ngokweqile) ivalvu yezokuphepha iyavulwa, futhi umsebenzi wayo ukukhulula ukunyuka kwengcindezi okubangelwe ukulahleka okujwayelekile kokuvuza kokushisa kwesendlalelo sokusekelwa nokusekelwa, noma ukukhuphuka kwengcindezi okubangelwe ukuvuza kokushisa okusheshayo ngemuva kokuphuma ungqimba lwesemishi luphukile nangaphansi kwezimo zomlilo. Lapho i-valve yezokuphepha ihluleka, i-disc eqhumayo izovula ukukhipha ingcindezi yokuqinisekisa ukuphepha kwesilinda segesi.
Qaphela: Lapho ugcwalisa igesi yemvelo, sebenzisa ama-valve okuphepha aphindwe kabili futhi uqede i-disc yokuqhekeka ethangini elingaphakathi. Ukuvikelwa kwendawo ebiyelwe ngaphansi kwezimo zokucindezelwa kutholakala nge-vacuum plug. Uma ithangi langaphakathi livuza (okuholela ekucindezelekeni okuphezulu kakhulu kwe-interlayer), ipulaki yokuvula izovuleka ukukhipha ingcindezi. Uma kwenzeka ipulaki ye-vacuum ivuza, kuzoholela ekubhujisweni komshini we-interlayer. Ngalesi sikhathi, "ukujuluka" nokubanda kwegobolondo kungatholakala. Vele, isithwathwa noma ukufingqa ekugcineni kwepayipi elixhunywe emzimbeni webhodlela kuyinto ejwayelekile.
Isexwayiso: Akuvunyelwe nhlobo ukukhipha ipulaki yokuphuma ngaphansi kwanoma yiziphi izimo.
Qaphela: Ama-disc wokuqhekeka angasetshenziswa kanye kuphela. Idiski yokuqhekeka kufanele ishintshwe ngemuva kokuthi isebenze. Kungathengwa enkampanini yethu.
Langaphambilini Ibhodlela Le-Liquid Carbon Dioxide
Olandelayo: Liquid Oxygen eyisilinda
Isitsha se-Liquid Nitrogen
Liquid Nitrogen eyisilinda
Uquququza weNitrogen Flask
Amathangi E-Liquid Nitrogen
Isitsha Esincane SamaNitrogen